एमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा छैनः डा. पोखरेल « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, भदौ २२ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले एमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा नहुने बताएका छन् । नेपालले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापकीय ज्ञान र क्षमता बढाउनका लागि एमसीसी महत्त्वपूर्ण हुने उनको विश्लेषण छ ।